Clickfor.net | Blog Martida | Soo gudbi blog-ka martida - U qor US | Wararka & Maqaalka Blogging | Martida Blogging Site
5 Sharci oo loogu talagalay Wareysiyada Taleefanka ee Shaqooyinka Sharciga ah
Marxalad kasta oo ka mid ah habka waraysiga waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waxa ku gaadhsiiya natiijada kama dambaysta ah. Taas macnaheedu waa inaad u diyaargarowdo inaad si buuxda u sameyso waxa ugu fiican marxalad kasta oo ciyaarta ah. Haddii aad rabto inaad hubiso inaad u muuqato mid cajiib ah taleefanka, markaa waxaad u baahan doontaa inaad dib u eegto shantan...
5 Faa'iidooyinka Ahaanshaha Jimicsiga Subaxda
Inkastoo aysan jirin waqti la dhihi karo waa kan ugu fiican ee qof walba loo shaqeeyo, jimicsiga subaxda waa hab fiican oo lagu bilaabo maalintaada. Kadib 30ka daqiiqo ee lagugula taliyay maalin kasta oo jimicsi ah ka hor inta aanad bilaabin hawlaha maalinta, waxaad si fiican u hubinaysaa in aanay waxba kaa hor istaagi doonin...
5-ta khibrad ee ugu raaxada badan Hindiya
Waayo-aragnimada raaxada ee 5 ee ugu sareysa Hindiya: Hindiya waa mid ka mid ah meelaha ugu cajiibsan dhulka, oo leh xad-dhaaf dabiici ah iyo muhiimad taariikheed. Laakiin ka waran la kullankan farxadda dabiiciga ah ee dhexda boqortooyada Hindiya? Tani waxay suurtogal ka dhigtay meelaha soo socda ee dalxiiska raaxada ee dalka. sidoo kale nagu soo booqo The Sidaas 1. The...
Vrindavan: Maalin gudaha ISKCON
3 Hab Oo Fudud Oo Aad Ku Muujin Karto Mahadnaqa Madaxaaga
Waa maxay sababta ay tahay inaad ugu wareejiso Hagaajinta Fiisahaaga Shirkado Xirfad leh?
Ku sahamin Kolkata adeegga tagsiga ee Savaari ee ugu ammaansan inta lagu jiro Lockdown
Sababaha Loo Dalbado Safar Romantic ah Qof Gaar ah
4 Talooyinka Tafatirka Fiidiyowga ee aad u baahan tahay inaad ogaato
Beddelka Chromecast waxaad u tixgelin kartaa TV-gaaga
Ku ilaali hantidaada dhijitaalka ah xalalka amniga Kaspersky ee Airtel Thanks app
5 Siyaabo Fudud Oo Wanagsan Oo Loo Ilaaliyo Tamarta
Waa kuwee 6bt Cummins ee ugu fiican Beddelkaaga?
Matoorka 6-dhululubo ee Diesel wuxuu noqday mid caan ku ah warshadaha xamuulka sababtoo ah waxay bixiyaan dhaqaale shidaal oo wanaagsan iyo raacitaan wanaagsan. Ku dhawaad ​​​​dhammaan kuwa sameeya xamuulka ayaa bixiya matoorada Naaftada ah ee 6-silsiladda ah sida caadiga ah. Maanta, waxaad ka dooran kartaa boqolaal nooc oo baabuurta xamuulka ah oo kala duwan adduunka oo dhan. Iyadoo ku xiran baahidaada, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad beddesho 6-dhululubo... Read More
Sida loo iibsado Crypto ee Ukraine?
Warshadaha crypto ayaa muujiyay kobac weyn labadii sano ee la soo dhaafay. Meelo badan oo badan oo lagula tacaalayo hantida dhijitaalka ah ayaa ka muuqda suuqa, iyo mashaariicda crypto ayaa si degdeg ah u koraya. Sababtaas awgeed, dad badan oo aan hore u xiisaynaynin goobta loo yaqaan 'crypto sphere' ayaa bilaabay inay la yaabaan halka ay ka iibsanayaan cryptocurrency ... Read More
Sida loo doorto Adeegyada Daryeelka Cawska ee Xirfadlayaasha ah
Ma ogtahay in celceliska Maraykanku uu ku kharash gareeyo 70 saacadood sannadkii ka shaqaynta deyrka ama beerta? Maalgelinta daryeelka cawska waxay noqon kartaa hab degdeg ah oo lagu daro saacado qaali ah dhamaadka usbuucaaga. Haddii aad raadinayso dayactirka dayrka caadiga ah ama xirfadleyaal si ay u xalliyaan mashaakil adag, shaqaaleysiinta adeegyada daryeelka cawska ayaa kara... Read More
Gacan-qabsiga Tuubada Beer ee gaarka ah ee Kegerator-kaaga
Quruxda cabitaanka biirka ayaa aad muhiim u ah. Soo iibso gacan-qabsiga tuubada biirka ee gaarka ah si aad wakhtigaaga firaaqada uga dhigto mid qurux badan. Ka hel gacan-qabashada biirka ee ugu cajaa'ibka badan dukaanka khadka ee Cabbitaannada Craft. Gacan-qabsiyada Tuubada Beer ee ugu Fiican oo Kegerator-kaaga ka dhigaya mid gaar ah oo qurux badan oo aan caadi ahayn iyo gacan-qabsiga biirka ee la yaabka leh ayaa loo baahan yahay labadaba cabbitaanka... Read More
Tafatirka waa mid ka mid ah dhinacyada aadka loo ilduufay ee soo saarista fiidyaha. Oo weliba, waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Waa waxa taxane goos goos ah sheeko u beddelaya! Waa kan arrinku in kastoo, oo leh muuqaal tafatirka. Haddii aad si sax ah u qabato shaqadaada, qofna ma ogaan doono sida ay u wanaagsan tahay. Taa beddelkeeda, waxay noqon doonaan... Read More
Doorashada shahaadaynta u dhaxaysa CCSP (Certified Cloud Security Professional) iyo CISSP (Shakhsiyaadka Ammaanka Nidaamyada Macluumaadka) waa mid adag. Mar haddii ay labada shahaado isku mid yihiin oo ay soo saareen isla hay'ad lagu magacaabo (ISC)2 (Daladda Shahaadada Nidaamka Nabadgelyada Macluumaadka Caalamiga ah). Waxaad dooran kartaa shahaadada aad rabto inaad qabato iyadoo ku xiran waxaad rabto... Read More
5 Faa'iidooyinka aan la rumaysan karin ee Suuqgeynta Dijital ah ee Meheradaha
Waxaad arki doontaa qaab aan caadi ahayn haddii aad waligaa ka dhex dhex gasho xisaabaadka suuqgeynta dhijitaalka ah. Ka baadh xogta dhinac kasta oo suuq geynta dhijitaalka ah - warbaahinta bulshada, SEO, iimaylka - waxaadna ogaan doontaa in xogtu ay had iyo jeer muujiso isbeddel sare. Waxaa laga yaabaa in taasi ay sabab u tahay in intarneedka uu yar yahay marka la barbar dhigo inta badan hal-abuurada casriga ah. Hadii arintu sidaas tahay,... Read More
5-ta Astaamood ee Badbaadada ugu Fiican Baabuurkaaga 2022
Waxaad noqon kartaa darawalka ugu fiican aduunka, laakiin mar walba ma saadaalin kartid sida dadka kale ee wadada ku jira ay u dhaqmi doonaan. Qof ayaa kaaga soo dadajin kara meeshaada indhoolaha ama biriiga si lama filaan ah marka aad hamaansato. Markay taasi dhacdo, astaamaha badbaadada gaarigaaga ayaa badbaadin kara noloshaada. Inta badan baabuurta casriga ah waxay leeyihiin dhowr... Read More
Chromecast waa mid ka mid ah tignoolajiyada ugu fiican ee lagu soo rogo waxyaabaha ku jira taleefankaaga ama tablet-kaaga shaashad weyn. Aad bay u fududahay in lagu xidho TV-ga aad bayna u fududahay in la isticmaalo. Laakiin isticmaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad samayso go'aanno caqli-gal ah marka ay timaaddo maalgelinta tignoolajiyad kasta. Noqo... Read More
Marka dunideenu ay sii kordheyso mid la mid ah adduunka khadka tooska ah ama dhijitaalka ah, khatarta weerarrada internetka ayaa sii caan ah. 39-kii ilbiriqsi kasta, waxaa jira weerar dhanka internetka ah oo ka dhacaya meel adduunka ka mid ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in ka badan 2,200 weerar internet maalintii. Waa nambar aad u naxdin badan adduunka oo ku wareegaya khadka. Read More
1 2 ... 56 Qoraalada ka horeyay
Sida loo doorto Adeegga Daryeelka Cawska ee Xirfadlaha ah...
Gacan-qabsiga Tuubada Beer ee gaarka ah ee Kegerat-kaaga...
2020 Clickfor.net . XUQUUQDA OO DHAN.